Phumla ngoxolo, Mhlobo wam uMike | Martech Zone
Phumla ngoxolo, Mhlobo wam uMike
NgoLwesibini, Julayi 15, 2008 NgoLwesithathu, Julayi 16, 2008 Douglas Karr
Ukuqala kwam ukusuka eVirginia Beach ndaya eDenver, yayindim kunye nabantwana bam ababini. Kwakumnandi ngendlela eyoyikisayo… umsebenzi omtsha, isixeko esitsha, waphela umtshato wam, nemali endandiyigcinile ihambile. Ukonga imali, ndandihamba ngololiwe ohamba kancinci ukuya yonke imihla. Emva kweeveki ezimbalwa, ndaye ndancokola nje nomfana okwitreyini ekhanyayo egama linguMike.
Lo ngumfanekiso endiwufumene kwindawo yonyana kaMike.
UMike wayeyindoda ende. Ndingumfana omkhulu, ke yiyo loo nto siyibethile. Emva kokwazi uMike, ndafumanisa ukuba usebenza njengeMarshall ekhusela iijaji zedolophu edolophini. Ngo-9/11, uMike wayenomsebenzi obalulekileyo kwaye wayeluthanda uxanduva. Umoya wakhe wokukhusela awuzange uphelele kumanqanaba enkundla. Rhoqo bendifumana uMike efumana isihlalo kuloliwe olula phakathi kotywala kunye nabanye abakhweli. Esiphakathini sencoko yethu, bendizakubona ukuba ndiye ndalahlekwa ngqalelo ngelixa ajonge abanye abantu. Babengazi nokuba ukhona ebakhusela.
Eli yayilixesha ebomini bam apho ndandinemibuzo emininzi kwaye ndingenazo iimpendulo ezininzi. Ndaqala ukuya eCaweni kwaye ngolunye usuku lwam lokuqala ndajonga ngaphesheya kweCawa kwaye kwakukho uMike noKathy. Andikholelwa ukuba yinto eyenzekileyo.
UMike wandithatha phantsi kwephiko lakhe wandivulela ikhaya lam nabantwana bam. Sichithe iholide ezimbalwa kunye noMike, uKathy kunye nabantwana babo (abadala). Incoko zethu kuloliwe bezimnandi kwaye ezinye zezona nkumbulo zimnandi endinazo ngeDenver. UMike wayeluthanda usapho lwakhe ngaphezu kwayo yonke into esehlabathini. Amaxesha amaninzi awuboni indoda enesiqu sayo ikrazuka, kodwa into ekufuneka uyenzile yayikukuqala ukuthetha malunga nosapho lwayo.
Ngaphandle kosapho lwakhe, uMike wayenobudlelwane obusondeleyo noYesu Krestu. Yayingeyonto ayinxibileyo emkhonweni wakhe, kodwa yayikude nengxoxo. UMike wayengomnye wamaKristu awayenombulelo ongazenzisiyo ngako konke awayenikwe kona. Ndabona uvuyo nokuzithemba kuMike ongakufumani kubantu abadala abaninzi, ubukhulu becala ngenxa yokholo kunye nosapho. UMike akazange ashumayele, wazama ngenene ukuphila ubomi bakhe ngendlela awayecinga ukuba uThixo angafuna ngayo. UMike wabelana ngolonwabo lwakhe kunye namava akhe kuthando lukaThixo nawe. Ayizange inyanzeliswe, ayizange igwebe.
Ndifumene inqaku elivela kuKathy, inkosikazi kaMike, ngobusuku banamhlanje esithi usweleke elele. Ndothukile. Ndidanile kuba ndingazange ndibuyele ndiye kutyelela uMike kwaye ndibuhlungu nangakumbi kukuba ndingazange ndihlale nditsalela umnxeba umnxeba. UKathy nosapho lwakhe bafanele bazi ukuba wayeyinxalenye ebalulekileyo yobomi bam. Andithandabuzi ukuba uThixo ubeke uMike kuloliwe omnye rhoqo njengoko ebendenza ukuze andincede ndifumane indlela yam.
Ndihlala ndibulela uMike, uthando losapho lwakhe, kunye neenkumbulo ezintle abazinike mna nosapho lwam. Inkosi ikusikelele, Mike. Lala ngoxolo. Siyazi ukuba usekhaya.
tags: ukubekwa kwentengiso
I-WordPress eguqukayo ibe yindawo yokugcina amandla eCMS
Uyenza njani ukuya kwiNkomfa yeBlogging ye- $ 2,000 ye- $ 49
Jul 16, 2008 ngo-1: 46 AM
Doug, yintoni ubungqina kubomi umhlobo wakho Mike. Ivakala njengendoda emangalisayo eyayinempembelelo kuye wonke umntu edibene naye. Enkosi ngokwabelana ngebali lakho kunye nokwabelana ngobungqina obuthambileyo bukaMike. Ndiyaxolisa ngokulahlekelwa ngumhlobo wakho.
Jul 16, 2008 ngo-11: 07 AM
Enkosi Becky. Ngamanye amaxesha sibathatha lula abo basikhuselayo, kwanabahlobo bethu.
Jul 16, 2008 ngo-11: 57 AM
Omnye umhlobo we UMike wandifowunela kwaye wandivumela ukuba athumele naye. Bendingamazi uSteve, kodwa ngokufunda izithuba zethu zozibini – uyabona ukuba wayekhethekile kangakanani uMike.
NgoJulayi 16, 2008 ngo-2:21 PM
Enkosi ngamazwi akho amakhulu kunye nekhonkco kwesinye isithuba.
Bobabini bathetha lukhulu kwintsapho yethu.
NgoJulayi 16, 2008 ngo-2:38 PM
Imithandazo emininzi iya kusapho lwakho. 'Ndiboleke' ifoto entle kaMike obunayo kwindawo yakho. Ngumfanekiso omhle kunye nendlela endimkhumbula ngayo uMike.
NgoJulayi 16, 2008 ngo-2:53 PM
Isiqwengana esichukumisa ngokwenene malunga noMike, uxolo kakhulu ngokulahlekelwa kwakho ngumhlobo olungileyo. Ndiyavuya ukuba wabelane ngale nto, ibali layo elimnandi kwaye ndicinga ukuba sisikhumbuzo esibalulekileyo sokuba ngamanye amaxesha ezona zinto zimangalisayo zenzeka ngeendlela ezimangalisayo.
NgoJulayi 21, 2008 ngo-12:26 PM
Enkosi kakhulu ngeposti yakho malunga notata wam, ndiyavuya ukuva kubantu abaninzi abahlonipha utata wam kakhulu, sonke siyakumkhumbula kakhulu, kodwa hlala ukhumbula ukuba ukwindawo engcono kakhulu ngoku kwaye usajongile. phezu komntu wonke, wonwabile njengoko unokulinda ukubona usapho kunye nabahlobo bakhe kwakhona. sigcine sonke emithandazweni yakho ingakumbi mama.
kwakhona enkosi kakhulu!!!
NgoJulayi 21, 2008 ngo-6:42 PM
Uyabheja, Kevin! Wayengumfana kwaye uMama wakho undixelela ukuba sele unguTata omkhulu, nawe! Iapile aliwi kude emthini.